पोस्टरम्यानको कथा : फिल्मी दुनियाँका अर्कै राजेश
Tue, Jan 16, 2018 मंगलवार, माघ २, २०७४
राजु स्याङ्तान शनिवार, पुस २९, २०७४ 1630 पटक पढिएको
काठमाडौं : उनको खास नाम त झालु सिंह क्षत्री हो । तर, फिल्म इन्डस्ट्रीका मानिस उनलाई राजेश भिखारी भनी बोलाउँछन् । नेपाली सिने क्षेत्रमा ‘राजेश’ अब नामबाट विशेषण भइसक्यो ।ती राजेशको काम सिनेमा खेल्नु हो, अटोग्राफ दिनु हो । अनि, पोस्टरमा टाँसिनु हो । यी राजेशको काम केवल पोस्टर टाँस्नु, टाँसिरहनु हो । कालो वर्ण, चुरोटले डढेर कालो भएको ओठ, पछाडि बाँधेको कपाल । मोटो शरीरमा कालै रंगको ज्याकेट । फिल्मका रंगीचंगी पोस्टरजस्तै रंगीन र गुलाबी छैन उनको जीवन ।
सारा सहर मस्त निदाइसकेपछि राजेश रातो रंगको बाल्टिनमा मैदाले बनेको गम र रिलिज हुन लागेका फिल्मका पोस्टर बोकेर सहरका भित्री गल्लीहरू चाहर्छन् र सहरका भित्ताहरूमा फिल्मका पोस्टर टाँसेर रात गुजार्छन् । जाडो, गर्मी या बर्खा, २० वर्षदेखि राजेशको दैनिकी यही हो ।
फिल्मको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सकिएपछि मात्र सुरु हुन्छ, राजेशको काम । ०४६ देखि काठमाडौं बस्न थालेका राजेशलाई नगरप्रहरीले पोस्टर टाँसेकै कारण ५० औं पटक पक्राउ गरिसकेको छ ।
गोपीकृष्ण सिनेमा हल राजेशको खास अड्डा हो । अन्तर्वार्ताका लागि उनीसँग भेट भएको पनि गोपीकृष्णको ग्राउन्ड फ्लोरको अँध्यारो होटेलमै हो । चुरोटको लामो सर्को तानेपछि उनले भनेका थिए, ‘मेरो अन्तर्वार्ता लिएर तपाईंलाई के फाइदा ? ’
कहिल्यै घामको ताप नछिर्ने चिसो कोठामा एउटा रातो बत्ती बलिरहेको थियो । छेउछाउमा थिए केही टेबल । चुरोटको गन्ध ह्वास्स आयो । अलिपर भाँडा माझिरहेको आवाज आइरहेको थियो । उनले दुईवटा चिया अर्डर गरे । त्यसपछि मैलो सोफामा थ्याच्च बसे । कलर प्रिन्ट गरिएको सानो पोस्टर टेबलमा फिँजाए र भने, ‘यो मेरो नयाँ फिल्मको नाम हो । सौगात मल्लसँग कुराकानी गरिसकें । दयाहाङसँग बाँकी छ ।’
सहर सफा राख्ने भन्दै महानगरपालिकाले पोस्टर टाँस्न बन्देज गरेपछि २० वर्षदेखि काठमाडौंका भित्तामा फिल्मका पोस्टर टाँस्ने राजेश ‘भिखारी’को पोस्टर पेसा अहिले संकटमा छ ।
भिखारी टाइटल किन नि ? उनले प्रस्टीकरण दिए, ‘मेरा केही साथीहरू भिखारी छन् । एकदमै माया लाग्छ उनीहरूको । त्यही भएर राखेको ।’ उनको घर पूर्व झापाको सरणमती-८ । बुबा धमनिया सिंह क्षत्री र आमा नेहालीसिंह क्षत्रीले दाउरा बेचेर हुर्काए तर स्कुल पठाउन सकेनन् । उनले स्कुलको ढोकासम्म टेकेका छैनन् । सामान्य लेखपढ गर्नसम्म आउँछ ।
७ दाजुभाइमध्ये उनी माइला सन्तान हुन् । उनलाई सबैले झालु भन्थे । गाउँमा बनिबुतो गर्ने र दाउरा बेच्नेबाहेक अरू उपाय थिएन । वर्षामा पानी चुहिरहने खरको सानो झुपडी थियो । आधा घाम घरभित्र लाग्ने, आधा बाहिर । त्यहीँ हुर्किए उनी । राजेश सानोमा खुब बाँसुरी बजाउँथे । गाउँभरिको बाँसझाङमा बाँसको टुप्पा एउटै बाँकी राखेनन् । टुप्पा काट्दै झिरले प्वाल पारेर बाँसुरी बनाए । बाँसको टुप्पा हराउँदा गाउँलेहरू सरासर उनको घर आउँथे र उनैलाई खोज्थे । कतिले थप्पड पनि लगाए । स्कुल जाने उमेरमा उनी अर्काको घरमा हरूवा बस्न गए । ८ वर्षदेखि ११ वर्षसम्म बाख्रा चराए । त्यसपछि हलो जोत्न थाले । बाख्रा चराउँदाको साथी हो निर्देशक प्रकाश आङ्देम्बे । राजेशले भने, ‘प्रकाश कहाँ होला आजभोलि ? उसले बनाएको फिल्म अस्ति लागेको थियो यहाँ ।’
हलो जोत्दा-जोत्दै भागेर राजेश बेलाबेला बोर्डर पारी पुगी हिन्दी फिल्म हेर्थे । मिथुन चक्रवर्ती र गोविन्दा उनको फेवरेट हिरो । तर, हेरेर त जिन्दगी चल्दैनथ्यो । हलो जोतेर जीवन उँभो नलाग्ने ठाने । र, परदेश जाने सोचे ।
काठमाडौंमा गलैंजा बुन्न पाइन्छ भन्ने सुने । त्यसपछि एकदिन सुरुंगा बजारबाट नाइट बस चढेर भागे । त्यो ०४६ सालतिरको कुरा हो । हाफपाइन्ट र हाफ कमिज लगाएका थिए । खुट्टामा थियो हात्तीछाप चप्पल । काठमाडौं आएर गलैंजा बुन्न थाले । तर, त्यो काम धेरै समय गरेनन् । ज्यामी काम गर्न थाले । ज्यामी काम गर्दागर्दै रेडियो नेपालको चौतारी कार्यक्रममा पुगे । त्यो अवसर संगीतकार बुलु मुकारुङले दिलाएका थिए । त्यहाँ गएर बाँसुरी बजाए । ‘झालु रेडियो नेपालको कलाकार बन्यो’ भन्दै गाउँमा हल्ला चल्यो । रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पनि दिए । तर, सफल भएनन् । झालुको कलाकार बन्ने सपना अधुरै रह्यो ।
ज्यामी काम गर्दागर्दै उनले निर्देशक शम्भु प्रधानको घरमा काम गर्न थाले । दिनभर प्रधानको घरमा भाँडा माझ्नु, रातभर उनकै फिल्मको पोस्टर टाँस्नु उनको दैनिकी बन्यो । उनलाई साताको सय रुपैयाँ पारि श्रमिक दिइन्थ्यो । राजेशको कटेरोमा घन्टी राखिएको थियो । कटेरोमै उनी सुत्थे । घन्टी बज्नासाथ दौडिएर प्रधानको अघि हाजिर हुन्थे ।
प्रधानको घरमा राजेशको दुई वर्ष बित्यो । उनका बुबा बिरामी भए । घर जान उनले १२ हजार रुपैयाँ मागे । त्यसबेला शम्भु प्रधानले भनेको शब्द उनलाई याद छ, ‘शिव श्रेष्ठकै रेट मागिस् त !’ उनलाई अन्तिममा दिइयो ३५ सय रुपैयाँ । त्यही पैसा लिएर घर गए । त्यसपछि राजेश कहिल्यै फर्केर प्रधानको घर गएनन् ।
राजेशलाई पहिलोपटक नरेन्द्र घिमिरेले स्पट ब्वाईको काम दिए । सुटिङस्थलमा खाना पुर्‍याउने, भाँडा माझ्ने, लाइट बोक्ने काम गर्न थाले । जीवनको ५ वर्ष त्यहीं बित्यो ।
राजेशको ०५४ सालदेखि पोस्टर जिन्दगी सुरु भयो । काठमाडौंभरि पोस्टर टाँस्ने नाइके जिम्मा उनैको हुन्थ्यो । रिङरोडभित्र राति टाँस्थे । रिङरोडबाहिर दिउँसो । कति रात नसुुती टाँसे । कति रात भोकै टाँसे । कति रातहरू यति चिसा थिए कि, पोस्टरै बालेर रात कटाए ।
एउटा फिल्मको पोस्टर टाँसेबापत ७० हजारसम्म पाउँथे । भोलिपल्ट बिहान त्यो पैसा सबै साथीलाई बराबरी बाँड्थे । अहिले मुस्किलले २० हजार पाउँछन् । त्यसबेला राजेशका २० जना साथी थिए । अहिले कम छन् । उनका केही साथी पशुपति क्षेत्रमा भिख माग्नेहरू, प्लास्टिक टिप्नेहरू, मसानघाटमा काम गर्नेहरू छन् । गोपीकृष्णबाट जयबागेश्वरीतर्फ आउने गाडी कुरेर बस्थे । राजेशलाई देख्नेबित्तिकै हुरुरु चढ्थे । पेटभरि मासुभात खान्थे, रातभरि टाँस्थे । अनि दिनभरि सुत्थे ।
पोस्टर टाँस्दा विभिन्न घटना भोगे उनले । एकपटक भुवन केसीको फिल्मको पोस्टर रातभरि टाँसे । भोलिपल्ट पुलिस आएर उनलाई हनुमानढोका पुर्‍यायो । किन समाइयो उनले थाहै पाएनन् । अर्को फिल्मको पोस्टर टाँस्दा नरेश पौडेलको फिल्म ‘हिरो’ को पोस्टर छोपियो भनेर उसलाई पुलिसले समाएर लगेछ । निर्माण पक्षको कुरा मिलेपछि पुलिसले उनलाई छाडिदियो ।
नगरपुलिसले उनलाई कैयन् रात शौचालयमा थुन्यो । उनले बोकेका गम र पोस्टर फ्याँकिदिन्थ्यो । भोलिपल्ट बिहान उनलाई छाडिदिन्थ्यो । बेलुकी फेरि मैदाको लेदो र पोस्टर बोकेर हिँड्थे उनी ।
एकपटक नसोचेको घटना भयो । रातको ३ बजेतिर पोस्टर टाँस्ने क्रममा एक जना साथी गाडीबाट लडेर बेहोस भए । तत्काल वीर अस्पताल लगियो । गाडीबाट लडेको भनेपछि प्रहरी केस गर्नुपर्ने भन्दै वीरले उपचार गर्न मानेन । त्यसपछि बीएन्डबी लगियो । त्यो साथीको आफन्त कोही थिएन । राजेश दिनभर अस्पतालको शड्ढयामा बस्थे, कुरेर । उनका साथीहरू फिल्म हलमा चन्दा उठाउँदै हिँड्थे । सिनेकर्मीसँग सय÷दुई सय मागेर ल्याउँथे । कैयन् दिन उनलाई अस्पतालमा राख्दा भविष्यका लागि जोहो गरेको राजेशको ३ लाख सकियो । साथीलाई पनि बचाउन सकेनन् ।
फिल्म हिट भयो भने उनलाई बोनस दिने थोरै छन् । फ्लप भयो भने पोस्टर राम्रोसँग नटाँसेर मान्छे हेर्न आएनन् भन्दै उल्टै थर्काउने धेरै छन् । कतिले फिल्म फ्लप भयो भन्दै पैसा दिएनन् । २० औं लाख उठाउन बाँकी छ । तर, उनलाई थाहा छ, अब त्यो पैसा कहिल्यै पाउँदैनन् । एक जना प्रोड्युसरले उनलाई पोस्टर राम्रोसँग नटाँसेको भन्दै फिल्म हलबाहिरै कुटे । कति प्रोड्युसरले रातभरि पोस्टर टाँस्न लगाए । भोलिपल्ट प्रोड्युसर अमेरिका हिँडिसकेको हुन्थ्यो । उनको मेनुमा केही फिल्म प्रोड्युसर ‘गुड नेम’ भएर बसेका छन्- नीर शाह, तुलसी घिमिरे, अशोक शर्मा, युवराज लामा...।
राजेशले ७ वटा फिल्म खेले । तर, जम्मैमा खलनायकको साथी मात्रै । सिर्फ भीडमा उभिनुपर्ने । नयाँ कलाकारले दशौं पटक टेक लिएको देख्दा उनलाई दिक्क लाग्थ्यो । आफू भए एकै टेकमा काम गर्थें भन्ने लाग्थ्यो । तर, उनलाई मौका दिने कसले ?
८ वर्षीया छोरी र जीवनसाथी लक्ष्मी सिंह क्षत्रीसँगै गौरीघाट बस्दै आएका राजेशको पेसा अहिले संकटमा छ । सहर सफा राख्ने भन्दै महानगरपालिकाले पोस्टर टाँस्न बन्देज गरेको छ । तैपनि, उनी राति लुकेर पोस्टर टाँस्छन् । अहिले जम्मा १० देखि २० हजार कमाउँछन् । जीविका चलाउन गाह्रो छ उनलाई । भन्छन्, ‘यही पेसामा आधा जुनी बित्यो । अरू काम गरिएन । अब यसरी नै कति दिन बित्छ, थाहा छैन ।’
‘आफ्नो जीवनदेखि दुःखी हुनुहुन्छ कि खुसी ? ’ उनी बोलेनन् । टोलाइरहे । राजेश अहिले फिल्म बनाउने योजनामा छन् । उनको फिल्मको नाम हो, ‘राजेश लाल भिखारीको प्रस्तुति ः कमल-काले ।’ उनले कलाकारसमेत छानिसके । कमलमा दयाहाङ राई, कालेमा सौगात मल्ल । अभिनेत्रीमा प्रियंका कार्की ।
‘फिल्म चल्छ ? ’ मेरो प्रश्नपछि उनी मौन भए । शून्यता छायो कोठामा । उनी बोलेनन् । अहँ बोल्दै बोलेनन् । घोसेमुन्टो लगाएर तलतिर हेरिरहे । बरर आँसु झारे । गाला हुँदै गुडेर भुइँतिर झरेको आँसुले उनको फिल्मको स्क्रिप्ट र पोस्टर भिज्यो ।
मंगलवार, माघ २, २०७४ महिलाको शव फेला
मंगलवार, माघ २, २०७४ फिर्ता भएका माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा !
मंगलवार, माघ २, २०७४ बाघको छाला र हड्डीसहित दुई पक्राउ
मंगलवार, माघ २, २०७४ चिसोका कारण थप एकको मृत्यु
मंगलवार, माघ २, २०७४ घुससहित इन्जिनियर पक्राउ, नासु र खरिदारलाई मुद्दा
मंगलवार, माघ २, २०७४ तुमगाउँ छाउगोठ मुक्त
मंगलवार, माघ २, २०७४ अन्नपूर्णकर्मी ढुंगानालाई क्रियाशील पत्रकारिता सम्मान
डा. केसी वीर अस्पतालमा
खाल्डोमा पुरिएको सात घण्टापछि जीवितै उद्धार..
आर्थिक सहायतामा छानबिन माग, फेरि थपियो ३४५ जनाको सूची 647
लामा काठ नहुँदा पुनर्निर्माण ढिलो 149
सुमार्गीको आरोप, ‘सिरोहियाले ब्ल्याकमेलिङ गरे’ 1770
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र आज तोकिने 2216
सडक घुम्तीमा ऐनाले दुर्घटना कम 716
जोखिमपूर्ण भवनबाटै सरकारी काम 277
नैतिकताको कसीमा कांग्रेस 604
अधिनायकवादको दिग्विजय यात्रा 519
पहिचान राजनीतिका संकट 500
महिलाको शव फेला 71
फिर्ता भएका माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा ! 295
बाघको छाला र हड्डीसहित दुई पक्राउ 139
चिसोका कारण थप एकको मृत्यु 98
घुससहित इन्जिनियर पक्राउ, नासु र खरिदारलाई मुद्दा 507
तुमगाउँ छाउगोठ मुक्त 134
केही घण्टामै डुब्यो फेसबुकको २५ अर्ब डलर 7350
भित्रियो चिनियाँ इन्टरनेट, तोडियो भारतीय एकाधिकार 1785
१३ वर्षीय केल्भिनले बनाए ड्रोन 1597
मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३० लाख 917
नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क सुचारु 1976
दुई दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध 1157